Mampiroborobo ny tenany ho toerana fizahan-tany tsy misy visa any Latvia, Kroasia ary Hongria i Sanya Sina
Home » Toerana fitsangatsanganana » Mampiroborobo ny tenany ho toerana fizahan-tany tsy misy visa any Latvia, Kroasia ary Hongria i Sanya Sina
Delegasionan'ny orinasa dimy mpikambana ao amin'ny tanànan'ny fizahan-tany any Shina Sanya, Hainan, nitsidika an'i Letonia, Kroasia sy Hongria, ao anatin'ny ezak'i Sanya hampiroborobo ny harena faratampon'ny loharanom-pizahan-tany any amin'ny firenena Baltika sy Nordic, miaraka amin'ny tanjona hanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fifanakalozana orinasa eo amin'i Sanya sy ireo tanàna amin'ireo faritra roa ireo. Ny delegasiona dia notarihin'i Rong Liping, Lehiben'ny Komitin'ny Kaominin'i Sanya ao amin'ny Fihaonamben'ny Mpanolo-tsaina Politika Vondron'olona Sinoa, ary niaraka tamin'ny tompon'andraikitra avy amin'ny Komitin'ny Kaominin'i Sanya ao amin'ny CPPCC, ny fizahan-tany Sanya fizahan-tany, kolontsaina, radio, fahitalavitra ary birao fanatanjahantena ary ny varotra kaominin'i Sanya Birao.
Ny 21 aogositra hatramin'ny 22 aogositra lasa teo dia nitsidika ny minisiteran'ny fitaterana any Letonia, ny maso ivoho misahana ny fampiasam-bola sy ny fampandrosoana any Latvia ary ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Riga. Ny delegasiona dia nandray tamim-pitiavana ny talen'ny Sampan-draharahan'ny Seranam-piaramanidina Arnis Muiznieks an'ny Latvia, ny Tale jeneralin'ny masoivohon'ny fampiasam-bola sy ny fampandrosoana Andris Ozols ary ny filohan'ny birao iraisam-pirenena Riga Ilona Lice.
Ny 23 aogositra lasa teo, ny hetsika fampiroboroboana ny tanànan'i Sanya (Riga), iray amin'ireo tetikasan'ny delegasiona hanitarana ny fahalalàna ireo lafin-javatra marobe ao an-tanàna miaraka amin'ny antso manokana ho an'ireo mpizahatany any ankoatry ny tanibe sinoa, dia natao tao amin'ny Hotely Radisson Blu Latvija any Riga. Maherin'ny 60 ny mpitsidika, ao anatin'izany ny Sun Yinglai, Chargé d'affaires ai ao amin'ny Masoivohon'i Repoblika Entim-bahoakan'i Sina any amin'ny Repoblikan'i Latvia sy Shen Xiaokai, Mpanolotsaina ara-toekarena sy ara-barotra ao amin'ny Masoivohon'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina any amin'ny Repoblikan'i Latvia , Arturs Kokars, Mpanolo-tsaina ny Birao ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Riga, Marta Ivaninoka-Cjina, solontena momba ny kolontsaina sy fizahan-tany any Shina ao amin'ny masoivoho misahana ny fampiasam-bola sy fampandrosoana any Latvia sy ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina sinoa any Letonia, ankoatry ny indostrian'ny fizahantany sy ny solontenan'ny haino aman-jery avy any Latvia, Failandy sy Litoania, dia nasaina handray anjara amin'ny hetsika fampiroboroboana.
Nandritra ny lahateniny tamin'io hetsika io, Ramatoa Rong dia nanasongadina ny politikam-pahafahana tsy misy visa any Sanya ho an'ny olom-pirenena avy amin'ny firenena 59 (izay i Latvia no iray) ary ny endrika mampiavaka an'i Sanya izay tena mahaliana ny mpizahatany sy ny mpanao vakansy, ary namintina fa “Sarotra ny mamaritra feno amin'ny teny ny hatsarana, ny heriny ary ny fahatsinjovan'i Sanya ho toeram-pizahan-tany. ” Nanao kabary ihany koa ny mpanolotsaina masoivoho ara-toekarena sy ara-barotra an'ny masoivoho sinoa, Andriamatoa Shen ary mpanolotsaina ny filankevi-pitantanan'ny seranam-piaramanidina Riga Andriamatoa Kokars, naneho ny fanohanany ny fifanakalozana fiaraha-miasa sy ny sidina mivantana eo amin'i Sanya sy Riga.
Maksims Pipekevics, solontena iray avy amin'ny masoivohon'ny fizahan-tany, dia nilaza tamin'ity hetsika ity fa “Ireo firenena telo manakaiky ny Baltics sy ny firenena Nordic dia firenena tsy misy visa avokoa ho an'ireo mpandeha mankany amin'ny Faritany Hainan. Ireo mpizaha tany avy amin'ireo firenena ireo dia tsy mila maka fotoana mangataka visa ary afaka mijanona ao Sanya mandritra ny 30 andro. Ho lasa varotra lehibe ny politikam-pizahan-tany tsy misy visa any Sanya. ”
Hatramin'ny fiandohan'ny taona, i Sanya dia nikarakara mavitrika ny hetsika fampiroboroboana ny fizahan-tany mba hanampiana ny orinasan'ny fizahan-tany an'i Sanya hanitatra ny tanjon'izy ireo eo amin'ny sehatra iraisampirenena, hisarihana ny fampiasam-bola avy any ivelany, ary koa ny fametrahana ireo fantsom-barotra sy ivotoerana fampiroboroboana any ivelany. Ny tanàna dia niara-niasa tamin'ny maso ivoho malaza indrindra maneran-tany, anisan'izany i Thomas Cook sy i Colatour, handefasana fizahan-tany fizahan-tany manerana an'izao tontolo izao. Ireo ivon-toerana fampiroboroboana dia efa miasa any amin'ny faritra sy firenena, ao anatin'izany ny faritanin'i Taiwan, Faritra fitantanana manokana any Hong Kong any Sina, Indonezia, Malezia, Japon ary India.
Tanàna italianina hamadika ny crypt an'i Mussolini ho mpizahatany